Football Khabar » नेसन्स लिगमा आज चार ठूला खेलहरू हुँदै : को–को भिड्दैछन् ?
नेसन्स लिगमा आज चार ठूला खेलहरू हुँदै : को–को भिड्दैछन् ?
युइएफए नेसन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज एकैदिन चार ठूला खेलहरू हुँदैछन् । यी खेलमा युरोपका हेभिवेट टोलीहरू आमनेसामने हुनेछन् । समूह चरणको पाँचौं खेलअन्तर्गत आजबाट खेलहरू हुन लागेका हुन् । यसअघि सबै टिमले ४–४ खेल खेलिसकेका छन् ।
आज हुने खेलहरूमध्ये जर्मनी र क्रोएसियाले आ–आफ्नो खेल खेल्नेछन् । अर्को एक खेलमा स्वीट्जरल्यान्ड र स्पेनको खेल हेर्नलायक हुनेछ । आज स्वीडेनले सन् २०१८ को विश्वकपको उपविजेता क्रोएसियालाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्दैछ । स्वीट्जरल्यान्डले स्पेनलाई आफ्नो घरमा भित्र्याउँदैछ ।
आज हुने खेलमध्ये सबैभन्दा रोमाञ्चक र प्रतीक्षाको खेल पोर्चुगल र फ्रान्सबीच हुनेछ । सन् २०१६ को युरो च्याम्पियन र सन् २०१८ को विश्व च्याम्पियन यी टोली आमनेसामने हुँदा धेरैको ध्यान यसै खेलमाथि हुनेछ । यो खेलका लागि पोर्चुगलले फ्रान्सलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्दैछ ।
जर्मनी भर्सेस युक्रेन – राति १ः३० बजे
पोर्चुगल भर्सेस फ्रान्स – राति १ः३० बजे
स्वीट्जरल्यान्ड भर्सेस स्पेन– राति १ः३० बजे
स्वीडेन भर्सेस क्रोएसिया– राति १ः३० बजे
प्रकाशित मिति २९ कार्तिक २०७७, शनिबार १३:४८